Accueil Ireo Sampana Antoko Mpihira Famerenan-kira 17-10-2015
“Aoka ny fiteninareo ho amin’ ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira” Kolosiana 4:6
Tena zava-tsoa tokoa ho an’ny mpiara-belona amintsika, ny hiresahantsika sy hanambarantsika amin’izy ireo ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra, ary aoka isika tsy hisalasala mihintsy ny hanao izany ; fa tena ho tsara tokoa, raha toa ny fomba fiteny sy firesaka ataontsika amin’izany dia tena mampiseho marina ny fahasoavana izay ambarantsika.
Aoka tena ho tsotra sy marina (sincérité no tiana ambara eto) isika amin’ny fomba fifaneraserantsika amin’ny hafa.
Aoka tena haneho ny fitiavana ny fanahy maha-olona isika amin’izany, ka tsy hanao teny fanaratsiana sy izay rehetra mety hahatonga fifandirana, fifanolànana, hiteraka fisaraham-bàzana.
Aoka tsy hanao teny mandràtra amin’ny hafa, eny na dia amin’ny fotoana hanehoana hevitra amin’ny fomba entitra aza.
Ka raha hiverina amin’ilay fanoharana, dia ny hoe “ho mamy sira”, ny tiana ambara eto dia hoe : aoka ny fomba fitenintsika hampisy endriny sy hampisy tsirony ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra izay ambarantsika, fa izany dia fomba hanehoantsika amin’ny endrika tsara tokoa, ny fijoroana ho vavolombelon’I Kristy.